नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफु कडा भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिद्ध्यिाइदिने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल समूहनिकट प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।
सम्बोधन गर्दागर्दै प्रचण्डले भने, ‘ ओलीजी म कठोर हुनुपर्‍यो भने तपाईंलाई भित्तामा पुर्‍याउन पनि सक्छु। र, अहिले तयार पनि भएको छु । अब तपाईं सिद्धिनुभयो,’उनले भने,‘अब तपाईंको हातमा केही छैन । र, तपाईंको समय पनि धेरै छैन । ’
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाए ।
‘हिजो जसकाविरुद्ध राष्ट्रवाद देखाउनुभएको थियो, आज त्यहीसँग मिलेर प्रतिगमन गर्नुभयो,’ प्रचण्डले भने,‘उहाँको राष्ट्रवाद खोक्रो साबित भइसक्यो ।’
नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल नेपाल समूूह ले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा शुुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्घ आयोजना गरेको विरोधसभामा सहभागीहरु ।
पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने दाबी गरेको समूहले राजधानी वरिपरिका जिल्लाबाट मानिसहरू ओसार्‍यो । काठमाडौंमा बेराजगार कार्यकर्ता छँदै थिए । गाउँबाट सोझा नागरिकलाई पनि राजधानी टेकाइयो । प्रदर्शनकारीको संख्या लाख पुग्यो कि पुगेन ? उनीहरूले नै हिसाब गरुन् । यो आम सरोकारको विषयमा पनि होइन ।
दिनभरिको दौडधुपले आखिर के प्राप्त गर्‍यो ? के ओलीले प्रतिगमन सच्याए ? के आयोगले आधिकारिकता दियो ? के अदालतले फैसला सुनायो ? अह ! केही पनि भएन । दिनभर शक्ति देखाएका कार्यकर्ता साँझ भोकले शक्तिहिन भएर फर्किए ।
प्रदर्शनका कारण आम मानिसहरूको दैनिकी भने अस्तव्यस्त बन्यो । बिहानैदेखि राजधानीका विभिन्न रुटमा सार्वजनिक सवारी निषेध गरियो । गन्तव्यमा हिँडेका हजारौं यात्रु ठाउँका ठाउँ अलपत्र परे । सडकमा दाहाल–नेपाल समूहका कार्यकर्ताले ताण्डव देखाए । सडकलाई रंगमन्च बनाए । प्रतिगमनविरुद्ध पैदल हिँडे । सडकलाई पदमार्ग बनाए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिबार, माघ १०, २०७७ १३:३९:५७